Soo dejisan Skitch 2.3.2.176 – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaScreenshotsSkitch
Bogga rasmiga ah: Skitch
Skitch – software yar si loo abuuro loona badalo sawirrada. Software wuxuu abuuri karaa shaashad shaashadda buuxda ama goobteeda xulashada. Skitch wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto shaashadda garaafyada sida garaafyada, jaantusyada joometeriga, stamps ama qoraalka iyo in ay isku hagaajiyaan midabkooda iyo dhumucdooda doorbidkaaga shakhsi ahaaneed. Software wuxuu leeyahay qalab lagu qariyo aagagga la xushay ee image, dalagga iyo zoom, muujiyaan qaybta muhiimka ah ee sawirka leh calaamad ama ku dabool leh qalin. Sidoo kale Skitch wuxuu soo jeedinayaa inuu badbaadiyo nuqulkii ugu dambeeyay ee sawirkii la rabay oo u dir email ama shabakadda bulshada.
Dib-u-soo-celin iyo ficil-celin
Beddel midabka iyo dhumucdiisnaanta garaafyada garaafyada
Ku dhajinta qalin iyo calaamadeeye
Dalag iyo sawir
Soo dejisan Skitch
Faallo ku saabsan Skitch
Skitch Xirfadaha la xiriira